ပြောတာလဲမင်းပါပဲ Empty | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ပြောတာလဲမင်းပါပဲ Empty
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Apr 24, 2016 in Opinions & Discussion | 12 comments
ကရင်ပြည် လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ကွမ်းတောရွာ အင်္ဂလီကန်ခွစ်ယံဘုရားကျောင်းဝန်းထဲ မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်ဦးဆောင် စေတီတည်ကြောင်း သစ်ထူးလွင်မှာ သလေဒီနယူးစ်ဂျာနယ်သတင်း ဖတ်ရတယ်၊ ဖဘမှာလည်း ပို့စ်တက်တယ်။ အလဲဗင်းနဲ့ ဆဲဗင်းဒေးမှာတော့ မတွေ့သေး.. တမင်ရှောင်တာ ဖြစ်မယ်။ ခုခေတ်ဘာသာရေး သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလာပုံ လူတွေရဲ့ အတ်တ ဘာသာရေးဖြစ်ကုန်တယ် ။ ဘာသာတိုင်းတော့ ကျမ်းစာ ကိုးကားပြောတာပဲ။ အရေးကြုံတော့ သက်လုံမကောင်းကြ.. ဆုတ်ခေတ်မို့ ရှေ့လျောက်ပိုဆိုးမည်။ သမိုင်းမှာ ဘာသာတိုင်း တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများကို အားကိုးရသည်။ မြန်တြံ့ပြည် တခုထဲ မထင်နှင့်.. တကဗာလုံး အတူတူပင်။ သာမန် မင်းပြောင်းမင်းလွဲ မသိသာပေမဲ့ နှစ်ရာချီကြာသော ဘုန်းတန်ခိုးပြင်းထန်သည့် အင်ပါယာမင်းများ လက်ထက်တွင် ဘုရင်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ အပြောင်းအလဲလိုက်လို့ အရှုပ်အထွေးဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ့်ဘာသာ မဟုတ်တဲ့အခါ တဖက်ကို အလေးမထား၊ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံဖြင့် ကိုယ့်ဖက်ကို ချီးမြှောက်…။
မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်က လှိုင်းဘွဲ့ချာ့်ခ်ျကျောင်း မူလသည် ဗုဒ်ဓသာသနိက နေရာဟုဆိုသည်၊ အထောက်အထား မည်မျှခိုင်မာကြောင်း မသိရ။ တဖက်တွင်လည်း အင်္ဂလီကန်ခွစ်ယံဘုရားကျောင်း ဇစ်မြစ်သိရန်လိုသည်။ တရားဝင် ခွစ်ယံသာသနိက အဆောက်အဦးလော၊ မည်သည့်ခေတ်တွင် မည်သူက တရားဝင် သတ်မှတ်ခဲ့သနည်း၊ မူလပိုင်ရှင် မည်သူနည်း စသည့်အချက်အလက်များ စုံစမ်းရမည်။ မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ပေါ့ပေါ့သေးသေးမဟုတ်… စရဏအားရှိသည်။ မဘသဘုန်းကြီးဆိုတမျိုး… ဒါပေမဲ့ အိမ်မက်တခုထဲနှင့်တော့ မလုံလောက်…။
သာသနာရေးဝံကျီး နှစ်ဖက်စလုံးနှင့် သွားတွေ့သင့်သည်၊ ကြားလူလုပ် စေ့စပ်ရေး စားပွဲဝိုင်း လုပ်ပေးရမည်။ ခိုင်လုံသော အထောက်အထား ရှာဖွေပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်သည်။ ရခိုင်ပဋိပက်ခလို လူသေမှ ကော်မရှင်ဖွဲ့ရမည် မဟုတ်၊ ပြသနာ မကြီးခင် လက်ဦးမှုအရယူ စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား ဥပဒေပိုင်းအရ၊ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ ခေတ်ကာလအရ မည်သို့ရှိသနည်း.. အဖြေတခု လိုအပ်နေပါသည်။
ခြံစည်းရိုးကာထားပြီး မလုပ်ပါနဲ့တောင်းပန်စာတင်ထားတဲ့မြေထဲကို.. လူအုပ်စုနဲ့.. ကျူးဝင်ရောက်..အဆောက်အဦတခုအတင်းတည်တာ.. မြေပိုင်ဆိုင်မှုစစ်တာမစစ်တာ နောက်ထား.. လောလောဆယ်တော့..
ဒါက.. လူသားတိုင်းသိသင့်..လိုက်နာသင့်တဲ့.. မူလဥပဒေ.။
ပြောသာပြောတာပါ..။ အဲဒီအကျိုးဆက်.. တတိုင်းပြည်လုံး.. ခံရလိမ့်မယ်..။
အဲလို တဗျီလုံး သိမ်းကြုံး ခံရမှာစိုးလို့ ဖမ်းလားဆီးလား လုပ်ဖို့ရှောင်ရမှာ မွာမွတ်သခင်… မူလဇစ်မြစ်သိမှ ဖြန်ဖြေမှု အောင်မြင်လိပ်မြည်… .ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိပ်ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တဲ့ ဘာသာရေးဖြစ်နေတာရယ် ၂ဖက်စလုံးက တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးမှာ အရေးပါသူများ ဖြစ်နေလို့ပဲ။ ဒါထက် ပိုသိရမှာ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ဖြေရှင်းနည်း အသုံးမဝံနိုင်လို့ပဲစ်….။ ဘက်မလိုက်ဘဲ အချက်အလက် အခြေခံ စေ့စပ်ပေးမှ အားလုံး အနည်းနဲ့အများ ကြေနပ်လာဘ်ခံနိုင်လိပ်မြည်… အားလုံး ပျော်ရွှင်ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်…. ငါကွ..။။။
အဲဒီ ဘုန်းကြီး က ဟိုး အရင် မာနယ်ပလော တုန်းက သင်္ကန်းဝတ် ကာချုပ် ဆို။ စစ်တပ် ကို အရင်ထဲ က ကူညီခဲ့တာလို့ သိဖူးတာပါဘဲ။
ဘုန်းကြီးက ဘုရားတည် လမ်းဖောက် လမ်းပြင် စတာတွေလုပ်တယ်စတာတွေလုပ်တယ်
သူ့နယ်မြေအတွင်း သားငါးသယ်မရ သတ်သတ်လွတ်စားရတယ်
သာမန် အဆင့်လောက်နဲ့ ဘုန်းကြီးကို ဆရာသွားလုပ်လို့မရဘူး
လက်နက်ကိုင်ကိုးကွယ်သူတွေ ဘုန်းကြီးကို အညိုညင်ခံမယ် မထင်ဘူး
ဆရာတော် ဘုကန့်လန့်လုပ်ရင် ပိုရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်
အူးကြောင်ကျီးကိုယ်တိုင်သွား လေ့လာ လျှောက်တင် ဆွေးနွေး မေးမြန်းပါ
ခေါင်းမာနေသေးရင် အင်္ဂါဂြိုလ်က မြေတဧကနဲ့ ဖြားယောင်းပါ
ကျူးတာထက်စာရင် တရားဝင်ပဲ ပိုကောင်းတယ်လို့ ဖြောင့်ဖြပါ
ဒီလထဲဝယ်ရင် တဧက ဒေါ်လှ ၂ ရာ၊ လကုန်ပြီး ၅ရာ လို့ပြောပါ
နာစာက ဒစ်ဂျစ်တယ် မြေပုံ ကို ဖိုတိုရှော့ပြီး
အရောင်းဝယ်စာချုပ်ပါ တခါထဲ လုပ်သွားပါ
ကျန်ရှိ ပြတ်တနာ အူးကြေင်ဘာတာ ရှင်းပါ
(အရေးကြုံတော့ သက်လုံမကောင်းကြ.. )
ဒီရွာထဲမှာတော့ ရွာဦးကြောင်စရာတော်ရဲ့ အဆုံးအမရနေကြလို့ တော်သေးရဲ့။ :p:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ အဲဒီ အဖြစ်ပျက် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်များ ကို အနူးအညွန့် တောင်းပန်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်များ ရဲ့ ရန်လိုမှုကင်းပြီး အလျှော့ပေး မေတ္တာထားလိုက်ခြင်း အတွက် လဲ အားနာမိပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဥပဒေစိုးမိုးလာချိန် အမှန်တရား ကပြန်ပြီး အနိုင်ရပါစေ။
အင်္ဂလီကန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော် စောစတိုင်လို Facebook wall မှကူးယူပါသည်။
Saw Stylo with ကိုကြီး ကာစီနို.
Yesterday at 20:33 ·
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အ ပေါင်းတို့ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ….
ယနေ့ကွမ်းတောရွာတွင် စေတီတည်ခြင်းနှင့် ပတ် သက်၍ ဖြစ်ပျက်သမျှကို အကြောင်းပြုပြီး ရန်ငြိုးထား ခြင်း၊ ခိုက်ရန်ပြုခြင်း၊ အမုန်းပွားခြင်းကင်းဝေးလျက် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ဗြဟ္မာစိုရ်တရားပွားများနိုင်ကြစေရန် ကြိုး စားကြပါလို့ အားပေးစကားပြောလိုပါတယ်။
ခရစ်ယာန်တို့၏ တရားတော်နှင့်အညီ အသက်ရှင် လျက် ပီသသောခရစ်ယာန်တို့၏ မွန်မြတ်သော အကျင့်စာရိတ္တများပြသကြပါ။ ခရစ်တော်ဘုရားက စိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ ထို သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဖူးမြင်ရလတ္တံ့။ ဘုရားသ ခင်ကို ဖူးမြော်နိုင်ရန်အတွက် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အားလုံး စိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူဖြစ်ဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
မေတ္တာတရားပွားများပြီး ခိုက်ရန်ပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ် ကြပါ။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က ခိုက်ရန်ပြုခြင်းကို ငြိမ်း စေတတ်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်း မူကား ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ဟု အခေါ်ခံရလ တ္တံ့။ ခိုက်ရန်ပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကြ ပါ။ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ကို တည်ဆောက်ပါ။ ပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးကို အား ထုတ်ကြပါလို့ မေတ္တာရပ် ခံလို ပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင်ပါဝင်သော ကရင်ပြည်နယ်တွင် မွေးဖွားကြသည်။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကြီးပွားကာ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပင် ဘဝနိဂုံးချုပ်ရမည့် ကရင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော် တို့ ဘဝနိဂုံးချုပ်သည့်နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း ပါမသွားနိုင်ပဲ ကိုယ်ကျင့်တရား တစ်ခုသာ မလွဲမသွေပါသွားကြမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်သွန်သင်ခဲ့သည်မှာ ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သောသူတို့သည် ကောင်းသောထွက် မြောက်ရာသို့လည်းကောင်း၊ ဆိုးယုတ်သော အကျင့် ကိုကျင့်သောသူသည် ထာဝရငရဲသို့လည်းကောင်း ထွက်ရကြလတ္တံ့။ လမ်းနှစ်လမ်းရှိသည့်အနက် မည် သည့်လမ်းကို ရွေးကြမည်နည်း။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြောကြားလိုသည်မှာ အဆိုးကိုအဆိုးဖြင့်မတုံ့ပြန်ဘဲ အကောင်းကိုဆွဲကိုင်၍ အဆိုးကိုအနိုင်ယူကြပါ။
အခု ဦးအောင်ကို ရဲ့ သမီး က ဘာပြောလို့ ဆိုလား ပဲ
ဖဘ မှာ အတော်လေး ဆဲဆိုနေကြတာ တွေ့မိတယ်။
တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေထဲ ဘုန်းကြီးတွေ အတော် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတယ်..
ဟိုတလောက ရှမ်းပြည်ထဲ ဘုန်းကြီးကို ပြည်နယ်စစ်တပ်က စောင့်ရှောက်ပေးတယ်..
ဘုရားဖူးတွေက သဒ္ဓါထက်သန်စွာ လှူကြတယ်… အလှူငွေတွေ အားကြီးရတယ်…
ဖားအံမြို့ထဲကနေ ဟိုးးးးလှိုင်းဘွဲ့ မြိုင်ကြီးငူ အထူးဒေသတခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် လမ်းတွေဖောက် ကျောင်းတွေဆောက်ပေးထားသူ။
အဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ ဒေသခံတွေ သွားလာလို့ အဆင်ပြေအောင် ကားတွေ စီစဉ်ပေးထားသူ။
.ဒေသတလျှောက် သားငါး မစားရ ဝက်နွားမွေးမြူ သတ်ဖြတ်ခြင်း မပြုရ ဘာရ ညာရ အမိန့်ထုတ် ထုတ်သလောက်လည်း လိုက်နာပေးကြ။
မီးရေးထင်းရေးကအစ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုလိုင်း အဆုံး အစစ သူ့ပဲ အားထားနေရတဲ့ အဲ့ဒီဒေသခံတွေ
အဲ့ဒီ ဆရာတော်ကို ဘယ်လောက် ချစ်ကြောက်ရိုသေလဲ ဆိုတာ မျက်မြင်။
အိမ်တိုင်းမှာ မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ပရဟိတပြုမှု မှတ်တမ်းတွေ . . . ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ဥာဏ်တော်ဖွဲ့တွေကို ရုပ်သံနဲ့ အခွေထုတ်ပြီး ဖြန့်ဝေထားလို့ အိမ်တိုင်းက ကြည့်ကြ ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွါးကြတာလည်း မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက အဲ့ဘက်ရောက်တုန်း သတင်းကြားတာတော့ မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်ကြီး မမာဘူး။ ဆေးပိုက် တန်းလန်း။
မိုက်မိုက် အတိုင်းးပဲ ??